Pachena zvakanaka zvose yakawanikwa kuti kutya, uye kutya mumwe chakaoma uye vavengi vedu?
Chinhu anofuridzira ngatitye hazvigoni zita asi kazhinji kurwara, kuva pasina basa uye nokudaro asingakwanisi mutitengere zvokudya, zvokupfeka, uye asingakwanisi kubhadhara rendi riri pamusoro kutya.
Murimi akabuda achibva chigayo ane hombe rinorema saga kumusana kwake. A bhiza akauya mutyairi akapa murimi kuti kuenda. Murimi akagara pasi pamwe chete bhegi rake musana vafare ava kuenda. Mutyairi anobvunza:
"Nei usina saga?"
"Zvaizova zvakanaka möcke vaviri ini bhegi aizofanira kuenda," akapindura ari murimi.
Tinowanzofunga kudaro apo Mwari anopa rubatsiro rwake.
Hatinzwisisi nguva dzose kuti pane kutya uye kutya kuti tive tiite zvinhu zvakaipa.
Tinogona kuinzwa sezvamakandida kunzwisisa kuti ramangwana yokutsiva anogona kunzwa kana chirema tichiita chinono shure panguva vachiziya nyoka hypnotizes vanodzvinyirirwa isati ndee. Saka isu inomhanya kure nyore kana akarara isu sandara uye kuita zvatinofanira kuita uye kuzvipa zvakawanda matambudziko.
Chinhu anofuridzira ngatitye hazvigoni zita asi kazhinji kurwara, kuva pasina basa uye nokudaro asingakwanisi mutitengere zvokudya, zvokupfeka, uye asingakwanisi kubhadhara rendi riri pamusoro kutya. Saka kuva pasina mari. Unogona kudzinga kure kutya mari zhinji asi ichikwira akachengeteka sezvo nyore akasaridza kure pamwe kuchangotanga mututu hwekurarama.
Kutya zvisiri kudiwa, kwete kuva zvakanaka zvakakwana, yokuva oga mukuru nokusingaperi. Vabereki vanotya nevana vavo remangwana. Vana vanorarama vachitya kuenda kuchikoro. To chiso incomprehension uye kutyisidzirwa. Chaizvo nokuti Jesu anoziva izvi zvose, chaanoreva kwatiri kuti hatifaniri kunetseka pamusoro zvokudya, zvokupfeka, kana upenyu hwedu.
Hapana ungashumira vatenzi vaviri panguva imwe chete. (Ruka 6:24) Naizvozvo tinofanira kusarudza mativi? Hongu, Jesu anojekesa. Kana ukaedza kushumira vaviri panguva imwe chete, zvichaita kusembura mumwe "webasa" uye kuda mumwe. Saka hapana pakati pasi. Chii izvozvo kutya kwedu uye kutya kuita? Pano Jesu anopa yakajeka tsananguro.
"Hamungagoni kushumira Mwari neMari. (= Mari nepfuma), musafunganya pamusoro poupenyu hwenyu, kuti muchadyei kana zvinobata, kana pamusoro pomuviri wenyu, kuti iwe uchava tikakupfekedzai pamwe. "
Anoyeuka shiri mutambarakede kuvapo. Mwari ane hanya nesu uye patinobvumira ave Mwari wedu uye isu achawana uchapupu kuti ndiye Baba vedu. "Baba venyu vanoziva kuti munoshaiwa izvozvi zvose, kutanga kutsvaka umambo nokururama kwake (pano kunouya vimbiso) uye muchava vose. Isa "saga" wako chaiwo "pengoro" uye rambai chipikirwa chaMwari kukutarisira uye kukonzera kutya kwenyu.
The yakanakisisa mushonga nokutya
Paul yakanakisisa mushonga muchityira anotipa kana anoudza sei ave zvose zvave nenzara uye akararama zvakanaka, akanga arohwa, akanga kufunganya, dzimwe nguva vanomutsirwa kudenga, aida ndokuvenga uye kurarama pasi rufu vanotyisidzirwa. Iye chido zvose kwatiri nguva dzose kufara uye tinotenda Mwari zvose ezvinhu muupenyu.
Kutenda Mwari ndiye kuda kwaMwari muna Kristu Jesu. It Anovhundutsira vanotya kutiza uye atipe rubatsiro pakusarudza tenzi zvakarurama muupenyu hwedu kana kutya aizoisa "rutsoka pamukova" uye mupasa anoedza pasa.
Vecka 19, måndag 10 maj 2021 kl. 21:49